Valanaretina… tsy fandriampahalemana | NewsMada
Valanaretina… tsy fandriampahalemana
Tsy misy tsy sahirana amin’izao ? Ao anatin’izao hoe ha­mehana ara-pahasalamana izao, zava-dehibe sy mahamaika ary tsy maintsy atrehina ny fiarovan-tena manoloana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Fiarovan-tena: fiaro­va­na ny hafa koa.
Na izany aza, tsy azo atao ambanin-javatra na ambin-javatra ny fitadiavana. Ny kibo tsy mba lamosina. Misy aza tonga amin’ny teny tsy tsaroana na teny tafahoatra hoe: tsy matin’ny aretina ny maro amin’izao fa matin’ny hanoanana sy ny tsy fisiana.
Amin’izany, mirongatra izaitsizy ny hala-botry na hala-boty: tsy an-tanàn-dehibe, tsy any ambanivohitra. Tsy misy tarehimarika aloha: firy ny trano na fisoko vaky, ny vilany sy lovia very… Toy izany koa ny akoho amam-borona, ny vary eny an-tanimbary…
Ny tsy takona afenina, tsy mifidy hasiana izay sendra ny tanany ny mpanao hala-botry na hala-boty amin’izao. Tsy mifidy fotoana, tsy mifidy toerana, tsy mifidy olona… Toy ny tsimokaretina Coronavirus, sanatria, ny olon-dratsy amin’ izany ? Tsy hoe fahavalo tsy hita maso fa eo akaiky na ma­nodidina eo ihany, na sendra mandalo, na alaim-panahy noho ny tsy fisian’izay mety mahita… Tsy olon-dratsy mati­hanina manao ho foto-draharaha ny halatra izany, fa ahe­tsika sy asesiky ny tsy fisiana?
Tsy misy tsy mitaraina noho izay hala-botry na hala-boty izay. Ny aza voany ihany ? Mila fanefitra azo antoka, fanafa­na mahomby. Tena ao anatin’ny fahasahiranana lalina sy maharitra ny maro amin’izao; ny kely ananana indray, afoy. Loza iray, loza roa.
Sao variana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanare­tina àry ny rehetra ? Tsy lavina, zava-dehibe maika tsy main­­tsy atrehina izay amin’izao fahamehana izao. Na izany aza, mila jerena akaiky koa ny firongatry ny valanaretina… tsy fandriampahalemana.
Be ny very fanahy mbola velona, indrindra ny any am­bani­vohitra. Mila fepetra tantsoroka ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana : mba tsy hampihanaka ny sasany hanao asa ratsy, mba hisian’ny fandriampahalema­na hiatrehana fivelomana…